Amerika Atsimo Shily Valdivia
Adiresy: Baobab Hotel, Reserva Biologica Huilo Huilo, Panguipulli, Chilie;
Phone: +56 9 4277 3450;
Ny trano fandraisam-bahiny Baobab dia miorina eo afovoan'ny alan'i Patagonia ao amin'ny tahirin-tsolitany Uilo-Uilo. Ny zava-drehetra eto dia mikendry ny hitazona ny lova voajanahary sy ny kolontsaina eo an-toerana. Ny fahafinaretana dia manome dia tsotra amin'ny alalan'ity tahirin-javaboary ity, tsy lazaina intsony hoe miaina anaty vatana tsy mahazatra.
Ny rafitry ny hotely
Tsy mahazatra ny hotely. Manitatra ny ambony izy io. Ny trano fandraisam-bahiny dia vita amin'ny hazo, vita amin'ny hazo vita amin'ny hazo ary misy hazo vita amin'ny hazo. Ao ambadiky ny lavaka ary ny kofehy, izany hoe, tsy misy dingana eo amin'ny etona. Raha mandeha lava ao anaty vy ianao dia afaka mivoaka eny ambony tafo. Eto dia afaka mahita volkano iray misy haavo mihoatra ny 2000 metatra ianao. Ao ambadiky sy ivelan'ny hotely dia misy balkon, izay manome fomba fijery mahatalanjona.
Ny fitaovana ao amin'ny hotely dia toy izao manaraka izao: 7 ety, voalohany dia misy trano fisakafoanana, efitrano fisakafoana, klioban'ny ankizy ary efitra fandraisam-bahiny. Ny kliokan'ny ankizy dia natao ho an'ny ankizy mandritra ny 4 ka hatramin'ny 12 taona. Any no misy ankizy mikarakara azy manokana. Ao amin'ny efitrano ambony dia misy efitrano 55 kanto, ny endrik'izy ireo dia manondro fomba fiasa ekolojika. Ny efitrano dia azo aleha amin'ny alàlan'ny ascenseur panoramic na familiana.
Indraindray dia ilazana ny SPA-center. Manana 970 metatra toradroa izy io. Misy dobo filomanosana, jacuzzi, saosy maina, toeram-pitsaboana fiompiana ary mazava ho azy, efitrano fandriana ary baoritra. Nitsidika SPA tany amin'ny faran'ny hotely. Ny mpitsidika any amin'ny hotely dia mahafinaritra ny mandany fotoana eto ary mahazo fialamboly tanteraka.
Ny efitrano fiantsoana dia mitentina 122,5 dolara ho an'ny olona. Ny efitrano dia natokana ho tranobongo roa. Ny tohatra dia miaraka amina tohatra vita amin'ny logs miaraka amin'ny rindrina avy amin'ireo sampana voatsabo. Ny zavamananaina voajanahary rehetra eto. Ny rindrina, ny valindrihana, ny trano ary ny fanaka dia vita hazo voajanahary. Ny efitra fatoriana dia apetraka amin'ny trano fidiovana tsara tarehy, izay misy ny zavatra rehetra ilainao. Eo amin'ny rindrin'ny efitrano manontolo dia misy varavarankely lehibe ahafahanao mankafy ny tontolo manodidina manodidina ny farafara. Ny varavarankely dia manopy maso ny lavarangana misy ny tranobe. Toa midika fa afaka mipetraka any mandrakizay ianao, mankafy kafe kafe aromatika na siramamy misy siramamy, mihaino ny feon'ny vorona miaina ao anaty tahiry ary mankafy ny ala tropikaly.
Ankoatra ny fandaniana fotoana ao amin'ny hotely manokana, dia mahaliana tokoa ny mitsidika ny fitsangatsanganana any amin'ny tahiry. Ankoatr'izany dia maro amin'izy ireo ihany no afaka mahazo mpitsidika. Afaka mitsidika ny tranombakoka volkano ianao. Ny vidin'ny tapakila dia 2000 pesos, izay latsaky ny 3 euros. Eto dia afaka mahita ireo vato avy amin'ny vanim-potoana samihafa, sakafo ary fitaovana. Ny bibidia dia mihetsiketsika any amin'ny faritry ny sisin-dalana, mandehandeha ny vorona. Fialan-tsasatra mahafinaritra mankany amin'ireo rianan'i Uilo-Uilo sy Puma.
Ahoana no hahatongavana any amin'ny toeram-pisakafoanana Wilo-Uilo?
Voalohany dia mila manidina any amin'ny renivohitr'i Chile Santiago ianao . Avy eo amin'ny fiaramanidina - mankany Valdivia, tanàna amoron-dranomasina 800 km atsimon'i Santiago. Any amin'ny seranam-piaramanidina dia misy birao fiara.
Paragoay - Fetibe
Prince George amin'ny panty dia nisaotra an'i Barack Obama noho ilay fanomezana
Kitapo sinoa amin'ny diabeta mellitus
Kapoaka avy amin'ny bitro
Ny fitaovana fandefasana spunbond
Fihetseham-po! Ny mummin'ny mony 1000 taona eo amin'ny moanina dia voaporofo tamin'ny taolana sy ny atidoha!
32 hevitra tsara ho an'ny tokantrano
Kitapo ho an'ny kitron
Fanamaivanana ny rindrina amin'ny tananao
Perfume amin'ny fofomamy vanila
Chace Crawford sy Nina Dobrev
10 ireo tranga tamin'ny fahafatesan'ny biby masiaka hafahafa
Ny Renirano Pivka
Karazana voankazo any Anyuta
Inona no vitamina tsara kokoa ho an'ny olon-dehibe?
Tao anatin'ilay tranobe any amin'ny tranon'ny firenena
Nandao ny koma ny vadin'ny Rahavavy Kardashian